By vijayafm on	 July 13, 2019 सम्पादकीय
गैँडाकोट नगरपालिका क्षेत्रलाई सफा सुन्दर हरियाली बनाउने भन्ने कुरा नयाँ होइन । गैँडाकोट नगरपालिका बने पश्चात नै यसका लागि काम भन्दा कुरा ज्यादा भए । यस वर्ष पनि गैँडाकोटलाई हरियाली र सफा बनाउने नगरकै नीति तथा कार्यक्रममा आयो । एउटै अर्थ तर नारा फरक, छरिलिएर आएका नीति तथा कार्यक्रमले फेरी कुरा बढी भयो कि भन्ने आंशका पनि उस्तै छ । एक घर एक विरुवा, एक वडा एक हरियाली पार्क, हरियाली नगर कार्यक्रम, क्लीन गैँडाकोट ग्रीन गैँडाकोट, हरित गैँडाकोट, मेरो फोहोर मेरो व्यवस्थापन, थ्री आरको नीति अघि सारिएको छ । थ्री आरकै पूर्णरुपलाई अर्को वाक्यांशमा पुनः राखिएको छ । रिड्युस, रियुज, रिसाइक्लीङ । यसरी छरिलिएका कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गरी ठोस कार्यक्रम अघि सार्नु आवश्यक छ ।
गँैडाकोट नगरपालिकाबाट मात्र होइन विभिन्न समुदाय तथा समूहबाट हुने र जारी रहेका अभियानले पनि टोलटोलमा बाल्टी वितरण गरेका छन् । हरेक पोलपोलमा बाल्टी देखिन्छ । बाल्टीका लागि लगानी पनि राम्रै छ । लगानी सरकारी होस् या समुदायको होस् । लगानीको प्रतिफल भने कम देखिन्छ । पोलपोलमा राखीएका बाल्टीमा भन्दा बाल्टी वरपर फोहोर देखिन्छ । पोलपोलमा झुण्डिएका बाल्टीमा राखिएको फोहोरको व्यवस्थापन कसले कसरी गर्ने ? फाहोर कहिले कहिले उठाउने ? बाल्टीमा कुहिने नकुहिने सबै फोहोर राखिदिने की नराख्ने । सडकमा राखिएका बाल्टीमा कुहिने फोहोर पनि राखिदिने ? यी समस्याका रुपमा बढ्दैछ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि बाल्टीको वितरण भन्दा पहिला मानिसहरुको सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । फोहोर बाल्टीमा राख्नुपर्दछ । बाल्टीमा राखिएको फाहोरको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्दछ भन्ने सोच सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सोच परिवर्तनका लागि गैँडाकोट नगरपालिकाले अघि सारेको निति तथा कार्यक्रम “मेरो फोहोर मेरै व्यवस्थापन” र “म तरकारी विना खान्न, किन्न पनि जान्न” दुबै कार्यक्रमलाई एकाकार रुपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । घरमा कुहिने फोहोरबाट मल बनाउने र घरकै करेशाबारीमा तरकारी फलाउने कामलाई प्रोत्साहन हुने गरी अघि बढ्न आवश्यक छ । एक घर एक विरुवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने हरियाली नगर कार्यक्रम, ग्रीन गैँडाकोट, हरित गैँडाकोट उस्तै अर्थ लाग्ने कार्यक्रमलाई घटाएर एउटा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लिएर जान सकिन्छ । कार्यक्रमस संख्यात्मक रुपमा थोरै तर त्यसको प्रभावकारीता धेरै हुने सोचका साथ अघि बढ्न सके नगर सफल र हरियाली बन्न सक्छ । नत्र अघिल्ला वर्षमा अघि बढाएका क्लीनसिटी गैँडाकोट अभियान जस्तो नयाँ छँदा नौपुल गाँस पुरानो भएपछि जगल्टाको नाश शिवाय केही हुने छैन । सोच परिवर्तनमा गरिएको लगानीले दीगो विकास हुन्छ, भौतिक परिवर्तनमा गरिएको लगानीको प्रतिफल क्षणिक मात्र हुन्छ । त्यसैले सफा सुन्दर हरियाली गैँडाकोटका लागि बाल्टी होइन सोच परिवर्तन आवश्यक छ ।